သင်္ကြန် နေရပ်ပြန်မည့် နေပြည်တော်ဝန်ထမ်းများအတွက် လက်မှတ်လိုအပ်ချက်ယာဉ်လိုင်းကော်မတီမှ တေ?? - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၃ – သင်္ကြန် ကာလ နေရပ်ပြန်မည့် နေပြည် တော်မှဝန်ထမ်းများအတွက် ဧပြီ ၇၊၈ ရက်တွင် ကြိုတင်ကားလက် မှတ်များ အပြီးရောင်းပေးမည် ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းများ လက်မှတ်လို အပ်သည့် အရေအတွက်နှင့် နာ မည်စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနအလိုက် ဧပြီ ၅ ရက် နောက် ဆုံးထား၍ နေပြည်တော်မော် တော် ယာဉ်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံထိန်း သိမ်းရေးကော်မတီ (အဝေးပြေး)သို့ ပေးပို့ရန် စာရင်းတောင်းခံထား ကြောင်း အဆိုပါကော်မတီမှ လက် ထောက်ဌာနမှူး(ပို့ဆောင်ရေး) ဦးအောင်ကျော်နိုင်က ဒီမိုကရေစီ တူဒေးသို့ ဧပြီ ၂ ရက်ပြောသည်။
“”သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန အလိုက် ဝန်ထမ်းတွေ လက်မှတ် လိုအပ်တဲ့စာရင်းကို ဘယ်မြို့ လက်မှတ် ဘယ်နှစောင်၊ နေပြည် တော်ကောင်စီမှတစ်ဆင့် လာမယ့် ဧပြီ ၅ ရက်မှာ နေပြည်တော် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ (အဝေး ပြေး) သို့ အမည်စာရင်းနဲ့ လက် မှတ်စောင်ရေ အရေအတွက် ပေးပို့ လာမည်ဖြစ်ပြီး ဧပြီ ၇၊ ၈ ရက်မှာ ကားလက်မှတ်တွေအပြီး ရောင်း ပေးမယ်။ သင်္ကြန်အပြီး ရန်ကုန်၊ မန္တလေးဘက်မှ နေပြည်တော်အ ပြန်မှာ ကားလက်မှတ်ကိုတော့ ရန်ကုန်ဘက်နဲ့ မန္တလေးဘက်မှာ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ချိတ်ဆက် လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု သင်္ကြန်ကာလအတွက်ဆိုရင် ပြီးခဲ့ တဲ့ မတ် ၂၉ ရက်က တစ်ခါစစ် ဆေးတာရှိတယ်။ လာမယ့်ဧပြီ ၅ ရက်မှာ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ပညာပေး ဟောပြောပွဲလုပ်မယ် ဧပြီ ၁၂ ရက် မှာ နေပြည်တော်ကောင်စီလမ်းဆုံ နဲ့တောင်ညိုလမ်းဆုံမှာ ကညနက ဦးဆောင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ တွေနဲ့ အဖွဲ့ခွဲပြီး အထူးစစ်ဆေးမှု အနေနဲ့ စစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်။ လက် မှတ်ခတိုးရောင်းရင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်”” ဟု၎င်းကပြောသည်။
သင်္ကြန်ကာလတွင် နေပြည် တော်မော်တော်ယာဉ်အဝေးပြေး ယာဉ်လိုင်းမှ ပုံမှန်ပြေးဆွဲနေသည့် မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများအပြင် ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးခရီးစဉ်ဘက် သို့ မော်တော်ယာဉ်အရန်နှစ်စီးစီ ထားရှိပြီး နေပြည်တော် ဘောဂ သီရိကားဝင်းမှ အဝေးပြေးမော် တော်ယာဉ်လိုင်း ၁၀၄ လိုင်းမှ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရှိ (၄၉) မြို့သို့အများဆုံး ရန်ကုန် နှင့်မန္တ လေးဘက်သို့ တစ်နေ့လျှင် မော် တော်ယာဉ်အစီးရေ ၂၈၀ နှင့် ၃၅၀ ကြား ပုံမှန်ပြေးဆွဲပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
တာမွေ စစ်ပွဲရပ် ဆန္ဒပြပွဲတွင် အရပ်ဝတ်ဖြင့် အကြမ်းဖက်ခဲ့သူများကို အမြန်ဆုံး စုံစမ်းဖော်ထုတ??
ဒါဘီပွဲများမှာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲကဲ့သို့ အရေးပါကြောင်း ဆေးလ်ဗားတုံ့ပြန်၊ မိမိကို စီရော??